‘काम गर्नका लागि पार्टीभित्र धेरै ठाउँ छन्, साथीहरुको असन्तुष्टि अराजक हुनु भएन’ | दर्पण दैनिक
‘काम गर्नका लागि पार्टीभित्र धेरै ठाउँ छन्, साथीहरुको असन्तुष्टि अराजक हुनु भएन’
प्रकाशित मिति: २०७६ श्रावण ७ गते ०७:५३
तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्तिहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको लामो समपपछी मात्र भर्खरै सबै जिल्लामा कमिटीहरु बनी एकताले पूर्णता पाउँदै छ । सबै जिल्ला र देशभरका महानगरपालिकाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज समेत तोकिसकिएका छन् । ललितपूर जिल्लामा पनि पार्टी केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम नै जिल्ला कमिटि गठन भएको छ , यद्यपि कमिटि गठन र शपथ ग्रहणका समयमा कमिटीमा नपरेका जिल्लाका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्टि र विरोध रहेको पनि पाईएको छ । अब नवगठित जिल्ला कमिटि जिल्लाभित्र पार्टीको विरासत जोगाउने र संगठन सुदृढीकरणमा कसरी अघि बढ्ला ? गत संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले नै क्लीनस्वीप गरेको जिल्लाको विरासत अर्को निर्वाचनमा पनि जोगिएला ? यिनै यावत विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर नेकपाको ललितपुर जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष हरिकृष्ण ब्यन्जनकार सँग दर्पण दैनिकका लागि सन्तोष दाहालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी लिईरहँदा केकस्तो जिम्मेवारीबोध भईरहेको छ ?
दुई ठूला पार्टी मिल्दा र त्यसको जिल्ला नेतृत्व लिँदा हामीमा थुप्रै अवसर र चुनौतीहरु सँगसँगै प्राप्त भएका छन् । पार्टीभित्रका थुप्रै साथीहरुलाई हामीले मिलाएर लानुपर्ने अवस्था छ । दुइटा फरक स्कुलिङबाट आएका साथीहरुलाई एउटै विचार , भावनामा गोलबद्ध गरेर लानुपर्ने अवस्था छ । थुप्रै साथीहरुलाई पार्टीभित्र अवसरको साथै काम दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । अहिले स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्तै केन्द्रिय तथा प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्दै जनताको बीचमा लाने र जनताले नपचाएका कामहरुलाई माथिल्लो सरकारका नेताहरुलाई सुझाव दिनु हाम्रो दायित्त्व हुन्छ । यसका लागि हामी संस्थागत ढंगले सल्लाह गर्छौं र सुझाव दिन्छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा मलाई एउटा ठूलो र गहन जिम्मेवारी प्राप्त भएकोछ , जुन पूरा गर्नका लागि मा सबैसँग सल्लाह र छलफल गरेर अघि बढ्नेछु ।
पार्टी संगठन निर्माण र सुदृढीकरणमा नयाँ जिल्ला कमिटि अब कसरी अगाडी बढ्छ ?
हामी सबै मिलेर संस्थागत ढंगले नै अगाडी बढ्छौँ । जसरी पार्टी केन्द्रिय कमिटीले प्रदेश कमिटि , जिल्ला कमिटि अध्यक्ष , सदस्य , इन्चार्ज , सहइन्चार्जहरुका लागि मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार लागु भयो , त्यसैगरी जिल्लाका स्थानीय र तल्लो तहसम्मका सबै कमिटि निर्माणका लागि पनि हामी मापदण्ड बनाएर जान्छौं । यसो हुँदा आफू निकटको मान्छे पर्यो भन्ने विवादपनि रहन्न , कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने स्थिति पनि रहन्न । मापदण्डभित्र पर्ने हरु मात्र रहन्छन । फेरी पछि अधिवेशन आउँदा जो जो साथीहरु सक्षम , जागरुक र क्रियाशील छन्, उनीहरु सोही मापदण्डभित्र रहेर स्वत रूपमा आउने भईहाले । यसरी हामीले निश्चित मापदण्ड अनुसार सबै कार्यकर्ताहरुलाई काम र जिम्मेवारी दिने पक्षमा नवगठित जिल्ला कमिटि छ ।
जस्तोकि अब महानगर कमिटि बनाउन बाँकी छ, १२५ जना त्यसैमा रहन्छन , नगर कमिटीमा ८१ जना अटाउछन, त्यस्तै गाउँ कमिटीमा पनि साथीहरुलाई स्थान हुन्छ । यस्तै त्यसपछि २८/२९ ओटा विभागहरु हामीले जिल्लामा बनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि ४००/ ५०० साथीहरुलाई स्थान दिन सक्छौं । त्यस्तै जनवर्गीय संगठनमा पनि सबै वर्गका साथीहरुलाई समेट्न सकिन्छ । जिल्ला कमिटिको सल्लाहकार , प्रदेशको सल्लाहकार , प्रदेशको विभाग, प्रदेश तथा जिल्लाको ज्येष्ठ नागरिक मन्च, जिल्ला परिषदलगायत थुप्रै ठाउँमा साथीहरुले स्थान पाउनुहुन्छ । यसरी काम गर्ने धेरै ठाउँ छन् , तर मलाई यही ठाउँ नै चाहियो भन्दा पनि आफूलाई सुहाउँदो र पार्टीले दिएको ठाउँमा बस्न राजी हुनुपर्यो । यसैगरी सबैलाई मिलाएर नै नयाँ जिल्ला कमिटिलाई अगाडी बढाउने प्रयत्नमा हामी छौं ।
पूर्व एमालेमा रहँदा पनि जिल्ला कमिटिको तपाईं नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको नेतृत्व र अहिले एकीकृत भएको पार्टीको नेतृत्व गर्न केके भिन्नता पाउनुहुन्छ ?
भिन्नता त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै । एउटा कुरा त यो एकदमै ठूलो पार्टी भयो । पूर्व एमालेको नेतृत्व गर्दा जुन बोझ थियो , अबको दिनमा त्यति मात्र बोझले पार्टी चल्न सक्दैन । अर्को मुख्य कुरो भनेको दुई ओटा फरक स्कुलिङबाट आएका साथीहरुलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । उहाँहरुलाई सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्छ , कसैलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ, उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिने क्रममा पनि कुन चाहिँ काम दिने भन्नेबारे सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको अवस्थामा संघीयता लागु भएको थिएन , प्रदेश र अहिलेको जस्तो स्थानीय तहहरु थिएनन । अहिले पार्टीको संगठन र नेतृत्वलाई पनि संघीयताको संरचनाअनुसार नै अगाडी बढाउनुपर्ने छ । फरक भए तापनि समयको माग र जनता कार्यकर्ताको माग अनुसार नै हामी अगाडी बढ्ने अठोट छ ।
अहिलेको ललितपूर जिल्ल्ला कमिटि सार्वजनिक भईरहँदा केही पुराना तथा नयाँ साथीहरु ( जो नयाँ जिल्ला कमिटीमा छैनन् ) मा कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखियो , पार्टीले योगदानको मुल्यांकन नगरेको पनि भनिन्छ नि ?
असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक नै हो , तर त्यो असन्तुष्टि अराजकतामा परिणत हुनु भएन । सबै साथीहरुलाई एकै पटक एकै ठाउँमा अटाउन त सकिन्न नि ! पार्टी एकता भएपछी ४४१ जनाको केन्द्रिय कमिटि बन्यो , त्यसको अपेक्षा गरेर पनि अटाउन नसकेका साथीहरु पनि त धेरै हुनुहुन्छ नि ! त्यहाँ पनि त असन्तोषको वातावरण पैदा भएको छ । प्रदेश कमिटि र अन्य जिल्ला कमिटीमा पनि हालत उस्तै छ । तर अहिले नपरेका साथीहरुले निराश हुने होइन , अझै सक्रिय भएर कुशलतापूर्वक पार्टीमा काम गर्दै अर्को अधिवेशन हुँदा जसरी पनि जिल्ला कमिटीमा अटाउनु पर्छ, पर्ने हिसाबले काम गर्नु पर्यो । असफलता बाट पाठ सिकेर हामीले थप जोश र जाँगर बढाउनु पर्छ । म पनि यस्तै विचार सुरुदेखी नै राख्दै र व्यवहारमा पनि लागु गर्दै आएको मान्छे हुँ । तसर्थ असन्तोष सबैमा हुन्छ र हुनु पनि पर्छ , तर त्यो अराजक हुनु चाहिं हुँदैन ।
अर्को कुरा असन्तोष व्यक्त गर्ने निश्चित ठाउँ, तरिका र समय हुन्छ । विगतमा नेकपा एमाले हुँदा पनि मैले भन्ने गरेको कुरो यही हो । मैले अघि पनि भनेँ, ठूलो पार्टी भएका कारण सबै मान्छेहरुलाई अटाउन सकिन्न । अहिलेको मापदण्डअनुसार हाम्रो जिल्लामा ८६ जना पूर्व एमालेमा र ६९ जना पूर्व माओवादीलाई भाग परेको छ । हाम्रो पूर्व एमालेको तर्फबाट कमिटि सदस्यहरु छनोट गर्दा मैले निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसैको आधारमा गरेको थिएँ, पूर्व माओवादीका साथीहरुले पनि उसैगरी गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी साबि साथीहरु हाम्रोर माओवादीका तर्फबाट पनि पक्कै पर्न सकेनन । तर उहाँहरुलाई मैले वचन दिन्छु कि , उहाँहरुको समस्या सुन्ने र बुझ्ने काम अब मेरो पनि हो । सोही अनुसार समस्याको समाधान गरी साथीहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिईन्छ ।
अब अर्को अधिवेशन आउँदासम्म पार्टीभित्रका सबै साथीहरुलाई मिलाएर सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्छ ?
अब सबैलाई सन्तुष्ट पार्न त सकिदैन , असन्तोष त सधैं भईरहन्छ यति ठूलो पार्टी र धेरै साथीहरु भएपछि । तर अहिलेको असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ हामी अवश्य गर्छौं ।
साविकका दुवै पार्टीका निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटिका पदाधिकारीहरुलाई अब केकस्तो जिम्मेवारी दिईन्छ ?
पूर्व पार्टीका क्षेत्रीय पदाधिकारीहरुको लागि महानगर, नगर , गाउँ कमिटीहरु बन्छन, कुनै कमिटिको सदस्य बन्नुभन्दा पनि कार्यकारी पद दिन सकियो भने त्यो एक किसिमको निर्णायक र क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता साथीहरुलाई हामीले कार्यकारी पदहरुमा मिलाएर राख्ने , उहाँहरुको जुन योग्यता र क्षमता छ ,त्यसमा लगाउने योजना छ । योबीचमा हामीले पार्टीलाई अझै धेरै जनताको बीचमा फैलाउन जरुरी छ । जोजसले यसअघि क्रियाशील भएर विभिन्न तहमा काम गर्नुभएको छ , उहाँहरुलाई त्यस्तै पोस्ट दिनको लागि म क्रियाशील रहनेछु ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा तपाईं आफूले हारेर पनि पार्टी नेतृत्वमा रहेर पछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा विपक्षीलाई जिल्लाभर क्लीनस्वीप गराउनुभयो । अब आउने निर्वाचमा पनि ललितपुरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपाको ) विरासत उही रहला ?
हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही नै छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आयामलाई ललितपूर जिल्लाभित्र अझै खँदिलो बनाउदै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य र प्रतिबद्धता रहेको छ । पहिलेको भन्दा पनि राम्रो गर्ने नै हो । प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारलाई पहिलेको भन्दा पनि धेरै मतान्तरले हराउने भन्ने प्रतिबद्धता हाम्रो नयाँ जिल्ला कमिटीले जाहेर गरेको छ । त्यतिबेलासम्म जनतासँग हाम्रो पार्टीको भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो भईसकेको हुन्छ ,सरकारको आलोचनालाई कम गर्न र चिर्न सफल भईसकेका हुन्छौं , पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरु जनताको बीचमा गैर यस्तो होईन यस्तो चाहिँ हो भनेर सुसुचित गरिएको हुनेछ । त्यसो हुँदा अझै राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
त्यसका लागि प्रशस्त चुनौतीहरु पनि त होलान नि !
चुनौतीहरु त छन् नि । पहिलो कुरो सबै कार्यकर्ताहरु सक्रिय र इमानदारीपूर्वक खट्नु पर्यो र जनताको बीचमा जानु पर्यो । त्यसो भएन भने त मैले मात्र भनेर लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । अहिले हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट पार्टी ठूलो र बलियो बन्नुको मुख्य कारण पार्टी र कार्यकर्ताहरु जनताको बीचमा गएर नै हो । मैले अघि पनि भनेँ, हामी १२५ सदस्यीय महानगर कमिटि बनाउछौं ,त्यसभित्र पनि वडा कमिटीहरु बन्दा महानगरमा नै १००० जना भन्दा बढीको कार्यकर्ता हामीसंग हुन्छन । यसैगरी नगर कमिटि , गाउँ कमिटि र सबै साना कमिटीहरु जिल्लाभर बनिसक्दा र जिल्लामा जिल्ला सल्लाहकार र विभिन्न विभाग बनिसक्दा ३/४ हजार पद पाएका कार्यकर्ता पार्टीमा रहन्छन । ती सबै कार्यकर्ता जनताको बीचमा गएर सुसुचित गर्दा चाहिँ जस्तोसुकै मुस्किल र चुनौतीलाई पनि हामी सामाधान गर्न सक्छौं ।
हरेक प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ , जसको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर विविध टिकाटिप्पणीहरु आईरहेका छन् , तपाईंलाई के लाग्छ ? यो सरकारले जनअपेक्षा र जनभावनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ त ?
काम गर्दै जाने क्रममा असन्तोषहरु त आईनै रहन्छन, केही केही कुराहरुमा गल्ती कमजोरीहरु पनि भएका छन् ।पछिल्लो समय धेरै असन्तुष्टि र टिकाटिप्पणीहरु आईसकेपछि मैले एकपल्ट पार्टीको घोषणापत्र पल्टाएर हेरेँ । महानगरका वडाध्यक्ष साथीहरुलाई पनि मैले भर्खरै मात्र त्यो घोषणापत्र पल्टाएर देखाएको छु । यातायात , हवाई यातायात, जल यातायात तथा रेल यातायातको सवालमा हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख भएको कुरा हो र सो कामहरु क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन हुने चरणमा पनि छन् । तर आजको भोलि नै छुमन्थर गरे जस्तो त केही पनि कसैले गर्न सक्ने कुरो होइन । उबेलामा हामी घरघरमा पाईपलाइनबाट ग्याँस ल्याउने काम गर्छौं जस्ता कुरा गर्दा पनि तत्कालै जुन नकारात्मक टिप्पणी र प्रचार गरियो , त्यो चाहिँ गिज्याउने र विरोधको लागि विरोध गर्ने काम मात्र हो ।
सरकारले घोषणा गरेका र नीति तथा कार्यक्रममा राखेका अधिकांश कामहरु अगाडी बढिरहेको स्थिति छ । यद्यपि पुरानो सरकारको पालामा जुन थियो, ब्युरोक्र्यासी त्यही छ , अदालत त्यही छ, पुलिस प्रशासन त्यही छ, सैनिक प्रणाली त्यही छ, जनताको मानसिकता त्यही छ । अहिले पनि जनताहरुले मेरो काम छिटो गराउनका लागि अलिअलि भएपनि पैसा खर्च गरौं भन्ने गलत मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । यस्तो अवस्था भएको यो देशमा तुरुन्तै सबै कुरा ठिक भईहाल्छ भन्ने कुरा भन्न नि सकिदैन र हुँदैन पनि । विश्व ईतिहासमा समेत रुसको क्रान्ति , चीनको क्रान्तिमा कम्युनिष्ट सरकार आउँदा त तुरुन्तै केही गर्न सकेको थिएन । मस्कोमा क्रान्ति सफल भएर कम्युनिष्ट सरकार आएको धेरै वर्षसम्म पनि वेश्यावृत्ति ,लुटपाट ,चोरीडकैती , भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरु चलिरहेको थियो । समाज नै त्यही किसिमको भएपछि रूपान्तरण गर्न समय लाग्छ ।
सरकारको कार्यशैलीको विषयमा पनि जति कुराहरु आएका छन् , कतिपय जायज र प्राय नाजायज छन् । जस्तोकि यही सरकार आएपछि मात्र भारतबाट विषादी फलफुल र तरकारी आएको, अरुको सरकार हुँदा त आएकै थिएन भनेजस्तो , यही सरकारले नै बाटो हिलो र धुलो बनाएको अरुको पालामा यस्तो थिएन भनेजस्तो , बाढीपहिरो आउँदा पनि सरकारलाई नै गाली गर्ने जस्तो गलत प्रचार भईरहेको छ । हामीले २०५० सालको गिरिजाप्रसादको पालाको र अरु सरकारको पालाको बाढीपहिरो पनि देखेकै हौँ । यससन्दर्भमा त मलाई के याद छ भने यो साल पनि गत साल पनि हामीले जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेर बाढीपहिरो आयो बहने के कसरी काम गर्ने भनेर पूर्वसतर्कता अपनाएका थियौं । प्राकृतिक विपत्तिलाई मानवीय बलले कुनै पनि हालतमा रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि । ठूला चीन , भारत , अमेरिका जस्ता देशले त प्राकृतिक महाविपत्तिको सामना गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले गरेका नराम्रो कामको विरोध पनि सकारात्मक तवरले गर्नुपर्यो , राम्रा कार्यको समर्थन गर्नसक्ने हिम्मत पनि सबैमा हुनुपर्छ ।
जिल्लामा सबै तल्लो तहसम्मको कमिटि कहिलेसम्म बनिसक्ला ?
हामीले अबको २ महिनाभित्रमा सबै सकाउने लक्ष्य राखेका छौं । सायद भाद्रसम्ममा सबै सक्ने भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो । केहीकेही ठाउँमा त हामीले वैशाखमै अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी एक किसिमको खाका तयार पारेका हौँ । बाग्मती र कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाबाट आईसकेको छ । अन्य ठाउँको पनि हामीले लिष्ट बनाईसकेका छौं । त्यो आईसकेपछि हामीले माथिबाट जिल्ला कमिटिको बनोट हुँदा जोजो साथीहरु असन्तुष्ट भए , उहाँहरुलाई पनि समेटेर सकेसम्म असन्तुष्टि कम गरेर हामी जानेछौं ।